ဂျာစီ bra & ပြင်သစ် Knickers PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ – အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / အမြိုးသမီးမြား / Lingerie / ဂျာစီ bra & ပြင်သစ် Knickers PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
ဒါက comfy ဆွဲ-အပေါ်ဂျာစီဘရာစီယာပုံစံဖြစ်ပါသည်. အလွယ်တကူနှစ်ခုသာဘက်ချုပ်ရိုးနှစ်ခုလှံလက်နက်နှင့်အတူဖန်တီး. ဒီ PDF ကိုအပ်ချုပ်ပုံစံအမြိုးသမီးမြားရဲ့အရွယ်အစားလည်းပါဝင်သည် 4-18 ခွက်ကို A / B / C / D ကို / DD အရွယ်အစားနှင့်အတူ. ရိုးရှင်းစွာအလိုအပ်သောခွက်ကိုအရွယ်အစားနှင့်တီးဝိုင်းအရွယ်အစားထွက်ခုတ်ဖြတ်. Create the matching french knickers in sizes4/6/ 8 / 10 / 12 / 14 /16 / 18.
SKU: JeBrPDSePa-1 categories: Lingerie, အမြိုးသမီးမြား Tags:: ဘရာဇီယာ, မိန်းကလေး, ဂျာစီ, အတွင်းခံ, အတွင်းခံအဝတ်အစား, အမြိုးသမီးမြား
ဒါက comfy ဆွဲ-အပေါ်ဂျာစီဘရာစီယာပုံစံဖြစ်ပါသည်. အလွယ်တကူနှစ်ခုသာဘက်ချုပ်ရိုးနှစ်ခုလှံလက်နက်နှင့်အတူဖန်တီး. ဒီ PDF ကိုအပ်ချုပ်ပုံစံအမြိုးသမီးမြားရဲ့အရွယ်အစားလည်းပါဝင်သည် 4-18 ခွက်ကို A / B / C / D ကို / DD အရွယ်အစားနှင့်အတူ. ရိုးရှင်းစွာအလိုအပ်သောခွက်ကိုအရွယ်အစားနှင့်တီးဝိုင်းအရွယ်အစားထွက်ခုတ်ဖြတ်.
ဒေါင်းလုပ်ပုံနှိပ်ခြင်းညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံလာ, အပြည့်အဝအရောင်သင်ခန်းစာ, အပ်ချုပ်အကွံဉာဏျစာရွက်များအဖြစ် PDF ဖိုင်ရယူရန်ပုံစံ.
ထိုကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး JERSEY BRA tutorial and the JERSEY FRENCH KNICKER TUTORIAL ဤနေရာတွင်သို့မဟုတ်ဤစာမျက်နှာ၌ဖွင့်လှစ်ဖို့အောက်က tab ကိုနှိပ်ပါ.
JERSEY BRA: Copyshop အရွယ်အစား: 30စင်တီမီတာက x 42cm / A4 စာမကျြနှာ:4/ အမေရိကန်ပေးစာ: 4
JERSEY FRENCH KNICKERS Copyshop size: 20cm x 79cm / A4 စာမကျြနှာ:5/ အမေရိကန်ပေးစာ: 4
STRETCH JERSEY FRENCH KNICKERS Copyshop size: 20 cm x 69cm / A4 စာမကျြနှာ:4/ အမေရိကန်ပေးစာ: 4
အားလုံးပုံစံ downloads, အင်္ဂလိပ်၌နေသော ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ, သို့သော်သင်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဤနေရာတွင်သင့်ရဲ့ရှေးခယျြသောဘာသာစကားမှာသင်ခန်းစာရှုမြင်စေခြင်းငှါ “ဘာသာ” မည်သည့်စာမျက်နှာ၏အပေါ်ပိုင်းညာဘက်နှင့်သင်နှစ်သက်တဲ့ဘာသာစကားရွေးချယ်ခြင်း.
ဂျာစီ bra သင်ခန်းစာ
အဆိုပါတီးဝိုင်းနှင့် bra ကဏ္ဍများ၏ဘေးထွက်ချုပ်ရိုးကိုက်ညီ.
တွယ်အပ်, ချုပ်နှင့်အပြီးသတ်တစ်ဦး overlocker နှင့်အတူသို့မဟုတ် zag ချုပ် zig.
အဆိုပါတွေဆီကနေလှံလက်နက် pin နှင့်ချုပ်. Finish ကိုအရင်ကဲ့သို့.
ယင်းအဝတ်ကိုအနိမ့်အစွန်မှ elastic အတွင်းခံတစ်အရှည် pin. အဆိုပါ elastic ၏ညာဘက်နှစ်ဖက်ရှိသည်နှင့်အဝတ်အတူတကွရင်ဆိုင်နေရ.
zig zag ချုပ်သုံးပြီးပူးတွဲလိုက်ပါ.
က elastic နီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချုပ်ရိုးထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ပိုလျှံချုံ့.
ယင်းချုပ်ရိုးစရိတ်ဖြည့်စွက်ရန် zig zag နှင့်အတူအောက်မှာ elastic နှင့်ထိပ်တန်းချုပ် Turn.
အခြားသိုင်းကြိုးသွင်းအမှတ်နောက်ကျောတဝိုက်သိုင်းကြိုးသွင်းအချက်အနေဖြင့်ထိပ်အစွန်းမှ elastic နောက်ထပ်အရှည် pin. အဆိုပါစင်တာရှေ့ v-ပုံသဏ္ဍာန်ဧရိယာယခု elastic နှင့်အတူထွက်ခွာရပါမည်. ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါ 4-5 ဖြည့်စွက်ရန်.
elastic တစ်အရှည်ပေါ် 40cm တိုင်းတာနှင့်အမှတ်အသား. လက်ဝဲလက်သိုင်းကြိုးသွင်းအမှတ်ဤအမှတ်အသားကိုက်ညီ. တက်ဗဟိုရှေ့ v-ပုံသဏ္ဍာန်ဧရိယာမှ pin elastic လက်ပတ်ကြိုးသွင်းအမှတ်သည်အထိ. အဆိုပါ elastic တလျှောက်တွင်အခြား 40cm တိုင်းတာ
ကို 'bra သိုင်းကြိုးသင်ခန်းစာ' ၌ရုပ်ပြအဖြစ်ကြိုးဖြည့်စွက်.
အဆိုပါဝယ်ယူ ဂျာစီ bra PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
You may prefer to pin this in place before stitching or stitch it as you go. တစ်နည်းနည်းဖြင့်, ensure not to stretch the elastic or the garment.
အဆိုပါဝယ်ယူ ဂျာစီပြင်သစ် Knicker PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
£ 4.95 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်
£ 5.52 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်